Vaovao - Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny gorodon'ny fiara
Rehefa mila mividy tsihy gorodona fiara isika, ahoana no hahitana ny mpanamboatra tsara indrindra?
Azonao atao ny mitady ao amin'ny Google amin'ny alàlan'ny "factory mats car", avy eo afaka mahita tranokala marobe ianao, ary mila mitsara hoe iza no factory mats fiara ilainao, ary ny manamarina ireo fitaovana mats an'ny fiara no ilainao. Misy karazan-pitaovana isan-karazany ho an'ny tsihy fiara: karipetra, tsihy fiara pvc, kodiarana fiara vita amin'ny fiara,Tsihy fiara TPE, Tsihy fiara TPR.
Manaraka izany dia mila manamarina ny kalitaon'ny tsihy fiara ianao, maro ny tsihy fiara vita amin'ny bobongolo ho an'ny maodelin'ny fiara isan-karazany, noho izany dia mila manamarina ianao raha toa ka manana ny maodelin'ny mats ny fiara ao amin'ny ozinina ary mila manamarina raha ny habetsahana ilainao dia ok hamokarana, ny ankamaroan'ny orinasa manana MOQ lehibe. Ny orinasanay dia manana tsihy fiara vonona ho an'ny ankamaroan'ny tsihy fiara, ny MOQ misy setriny 5 avy, ary manana mozin'ny fiara sy mould vatan-kazo an-jatony izahay.
Avy eo dia mila mahafantatra ianao raha afaka manamboatra lasitra ho anao ny orinasa, satria ho lehibe kokoa ny kaomandinao miaraka amin'ny tsihy fiara TPE misy kalitao tsara, ary hahazo mpanjifa mila manamboatra bobongolo miaraka amin'ny lamina manokana sy ny sary famantarana azy koa ianao, hampiseho ny tsy fitovian'ny tsihy fiara eny an-tsena. Ny lamina tsara dia hitondra anao amidy tsara ary hahasarika mpanjifa vaovao bebe kokoa. Ary hanampy ihany koa ny fanamafisana ireo mpanjifanao taloha. Ho lehibe kokoa noho izany ny orinasanao miaraka amin'ny tsihy gorodon'ny fiara TPE. Ny orinasanay dia afaka manao ny lamina sy ny sary famantarana amin'ny haben'ny fangatahanao, hamela anao hiavaka amin'ireo mpivarotra be dia be izy io.
Ny teboka manan-danja indrindra dia ny kalitao, tena zava-dehibe izany, miaraka amin'ny kalitao tsara, afaka mivarotra amin'ny mpanjifa bebe kokoa ianao, ary ny mpanjifa dia hivarotra tsaratsara kokoa miaraka amin'ny kalitao tsara, ary avy eo dia hanitatra ny isan'ny lamina amin'ny ho avy izy ireo. Ity koa dia ampahany tena lehibe. Izany ihany koa no tanjon'ny orinasa misy anay. Mampiasa ny fitaovana TPE tsara indrindra ho an'ny tsihy fiara sy ny vatan'ny vatanay izahay, nefa mitovy vidiny amin'ny ozinina hafa. Tsy dia mahazo tombony firy izahay fa ny mpanjifa rehetra nividy vokatra avy amin'ny orinasa dia afaka mahazo valiny 5 kintana tsara avy amin'ny mpanjifa rehetra, indray mandeha ho mpanjifanay, ho mpanjifanay mandrakizay. Manangana fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa rehetra izahay. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny famokarana anay dia ny fampiasana ny vidiny mitovy hanatsarana ny entana, tianay hatsaraina sy hatsara kokoa izany.
Ny teboka farany ilainao hijerena dia ny fonosana sy ny fandefasana. Ny orinasa ambany kalitao dia hampiasa ny kalitao ambanyFitaovana TPEary hampiasa ny fonosana ambany kalitao koa izy ireo. Hisy fahasimbana eo amin'ny tsihy fiara, tena zava-dehibe amin'ny fonosana.
Azontsika atao ny manangona fonosana 3 pcs (tsipiky ny mpamily, tsihy mpandeha, tsihy aoriana) ao anaty baoritra iray, ary afaka manonta ny logo manokana amin'ny carton isika. Amin'izany fomba izany dia afaka mandefa mivantana any amin'ny adiresy ilainao izahay na mandefa any amin'ny trano fanatobiana Amazon. Azontsika atao ihany koa ny manangona 20 pcs isaky ny baoritra, amin'ity fomba ity dia afaka mamonjy habaka, avy eo mitsitsy ny vidin'ny fandefasana ranomasina, azon'ny mpanjifa atao ny manangona azy amin'ny baoriny manokana aorian'ny nahazoany azy.